afnokura.com » फरक तीन प्रसंगः
फोनको घण्टी बज्छ ! मैले रिसिभर उठाउन नपाउँदै उताबाट सोधनी हुन्छ–‘यो नेपाली एम्बेसी हैन ?’ मैल उत्तर दिन्छु–‘तपाईले सही भन्नुभयो, यो नेपाली एम्बेसी होइन, यो त ……. लिमिटेड हो । भन्नुहोस् तपाई कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ ?’ उहाँले निकै रिसाएको पारामा फेरि सोध्नुभयो–‘नेपाली एम्बेसीमा किन फोन उठाउँदैनन् ?’ म उत्तर दिन्छु–‘खै सर, म पनि तपाइँजस्तै हुँ, किन फोन उठाउँदैनन् मलाई पनि केही थाहा भएन । सायद व्यस्त भएर होला ।’ मैले त्यति भन्न नपाउँदै उहाँले भन्नुभयो–मलाई एम्बेसीको कुनै कर्मचारीको मोवाइल नम्बर दिनुपर्यो । मैले फेरि भनें–‘त्यो ल्याण्ड लाइन बाहेक मलाई पनि कसैको व्यक्तिगत नम्बर थाहा छैन सर ।’ उहाँले पत्याउनुहुन्न–‘किन थाहा नहुने तपाईहरुलाई त थाहा भैहाल्छ नि बरु दिन मिल्दैन भन्नुस् न ।’ अन्तिममा मैले कुरो छोट्याउँदै भने–‘पहिलो कुरा थाहा भएन, दोस्रो कुरा थाहा भएको भए पनि दिन मिल्दैनथ्यो । मैले बुझेसम्म जापानमा नसोधिकन कसैको पनि फोन नम्बर कसैलाई दिन हुँदैन । अर्को कुरा तपाईले म को हुँ भनेर भन्नु आवश्यक छ । जुनसुकै कम्पनीमा तपाईले कसैलाई भेटन तथा कामले फोन गर्नु भयो भने तपाईको नाम र फोन नम्बर अनि फोन गर्नुको कारण जानकारी नगराएसम्म सम्बन्धित व्यक्तिसँग तपाई कुरै गर्न पाउनुहुन्न । तपाई आफ्नो नामै भन्न चाहनुहुन्न त म कसरी तपाईलाई सहयोग गर्न सकुँ ? अर्को कुरा तपाईले फोन गर्नु भएको ठाउँ यो होइन रहेछ, हस त धन्यवाद, मैले फोन राख्ने जानकारी दिंदै फोन राख्छु, फोन राख्दै गर्दा उहाँले रिसाएर मा…मा…र मु…मु… गर्दै भुतभुताउँदै गर्नुभएको बाहिरै सुनिन्थ्यो ।
एकोहोरिएर कम्प्यूटरमा घोप्टिईरहेको थिएँ । शनिवारको दिन भएकोले अफिसमा आउनेजानेको त्यति भीड थिएन । छेउमै बसेर काम गरिरहेको साथीले माउस अँठ्याउँदा आउने क्लिक ! क्लिक ! आवाजले सन्नटालाई चिरिरहेको थियो । एक्कासी ढोका खुलेको आवाजले म झस्किन्छु–घ्यार्र ! एकजना २७–२८ जति उमेरको पुरुष पाहुना भित्र छिर्नुभयो । सँगै बसेको साथीबाट सोधनी हुन्छ–‘हजुर नमस्कार ! के कति कामले आउनुभयो होला ? बस्नुस् न’ उहाँले भन्नुभयो–‘मेरो पासपोर्ट बनाउनु पर्ने, नागरिकता पनि अहिले साथमा छैन, त्यसमा पनि निकै हतार छ, यसो अलि चाँडो बनाउने उपाय केही छैन ?’ साथीले त्यसको लागि सबै कुरा दूतावासमा नै गएर सोध्न अनुरोध गरे । उहाँले एकैछिनको बसाईमा गरेका केही कुराहरु मैले अर्को काम गरिरहेको भए पनि सुनिरहें । कताकता कान नै विझाएको झैं लाग्यो । उहाँले भन्नुभएको केही कुराहरु यस्ता छन्–यसो केही पैसा तिरेर अलि छिटो गराउन मिल्ने भए त्यसरी बनाउन हुन्थ्यो । नेपालमा अंकल मन्त्री छन्, अंकललाई फोन गर्न लगाएर केही चाँडो हुने भए फोन गर्न लगाउनु हुन्थ्यो । नेपालमा एक कल फोनको भरमा काम बन्थ्यो यहाँ यो चाहिन्छ, त्यो चाहिन्छ लास्टै टेन्सन दियो भन्या । उहाँको अरु कुराहरु यहाँ राखें भने धेरै होला ।
दैनिक थुप्रै ग्राहकहरुसँग फोनमा कुराकानी हुन्छ । एकदिन त एकजना पाहुनाले फोन सेभ नगरेको भनेर निकै झपार्नुभयो । तपाईको ल्याण्डलाईनमा फोन आएकोले फोन सेभ रहेनछ म मोवाइलमा सेभ गरेर राख्छु भन्ने कसम खाएर चित्त बुझाएँ । अर्कोदिन फोन आयो । सञ्चो विसञ्चो सोधनी भएपछि उहाँले सोध्नुभयो –‘आजभोलि त त्यहाँबाट पनि नेपाल पैसा पठाउँनुहुँदोरहेछ ।’ मैले हजुर हो – हो, हाम्रो स्लोगन नै छ ‘ठाउँ एक सुविधा अनेक ।’ कहाँ कसलाई पठाउनुपर्ने होला सर ? मैले त पठाउने होइन अहिले ल्याउनु परेको छ । कोही नेपालमा रुपैयाँ लिएर यहाँ येन दिने छैनन ? –उहाँले सोध्नुभयो । मैले त्यस्तो त छैन सर भनेर कुरा सकाउन पाएको थिइन उहाँको कथा पनि शुरु भयो-मैले २० लाख जति ल्याउन पर्ने थियो, कोही भेटिए भने बरु मिलाएरै दिउँला यसो कोही भए खबर गर्नुहोला है । दुईवटा रेष्टुरेन्टको कन्ट्रयाक्ट पेपर बनिसक्यो नेपालबाट पैसा ल्याएर विजनेश गरुँ भनेको पनि सजिलै ल्याउन नपाइने कस्तो नियम होला । कस्तो देशमा जन्मिएछौं हामी त । उहाँलाई परेको समस्या त मलाई थाहा भएन तर उहाँले व्यक्त गर्नुभएको वाणीहरु अति नै कान कर्कश पार्ने खालका थिए । अनि उहाँ फर्किबक्सनु भएपछि मैले धेरै बेर अघिल्लो दिन भेटेको एकजना कुक साथीको सम्झना गरिरहें । उहाँले भन्नुहुन्थ्यो–काम लगाइदिन्छु, श्रीमती र छोराछोरी डिपेन्डेन्टमा बोलाइदिन्छु भनेर छँदाखाँदैको व्यवसाय बेचेर जापान आइयो अहिले त न काम छ न त मलाई जापान ल्याउने साहुजीकै बोलीमा राम्रो रेस्पोन्स । म जापान आउँदा नआउँदै उहाँले रेष्टुरेन्ट वेचिसक्नुभएछ । अहिले काम छैन । काम कहिले हुन्छ भनेर सोध्दा अब छिट्टै नयाँ रेष्टुरेन्ट खोलेर भन्नुहुन्छ । रेष्टुरेन्ट कहिले खुल्ने हो, म त आरेमारे परें । कथा आफ्नै, व्यथा आफ्नै ।***